Home Wararka Wasiirka Batroolka oo Xasan Kheyre dusha ka saaray saxiixa heshiisyada gaarka ah
Wasiirka Batroolka oo Xasan Kheyre dusha ka saaray saxiixa heshiisyada gaarka ah
Iyada oo horay loo ogaa in Xasan Cali Kheyre uu sameeyay qorshooyin badan oo ku xaraashayo kheyraadka dalka Soomaaliya gaar ahaan Shidaalka bada ku jiro ayaa hadaba waxa soo baxaya warar dheeriya oo ku saabsan ilaa xadka uu gaaray damaca Xasan Cali Kheyre.
Wasiirka Batroolka ayaa Xasan Kheyre gabi ahaanba dusha ka saaray saxiixa heshiisyada qarsoodiga ee la doonayay in lagu boobo hantida dalka iyo dadka.. Cabdirashiid Maxamed Axmed, Wasiirka Wasaaradda Batroolka XFS ayaa maanta laga sugayaa in uu tago xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka oo looga yeeray si wax looga weydiiyo heshiiska shidaalka lagu baarayo ee doodda badan dhaliyay.
Xaanshi uu soosaaray Xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka 21kii April 2022 waxa uu Wasiirka Batroolka XFS faray in uu xafiiskaas tago 24ka April 2022 oo shalay ku beegneed inkasta oo uu ka baaqday balse lama sheegin sababta dib u dhigtay.
Wasiirka Wasaaradda Betroolka iyo Macdanta XFS ayaa wax laga weydiinayaa heshiiskii uu sheegay in 15kii Febaraayo 2022 in uu la galay shirkadda (Coastline Exploration) oo qudheeda saacado kaddib xiligaas si rasmi ah usoo bandhigtay heshiiskaas.
Doodda ayaa daba-dheeraatay kaddib markii Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble uu kahor yimid heshiiskaan oo uu Wasiirka Batroolka sheegay in uu la ogaa Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Villa Somalia oo qoraal kasoo saartay arrintaan ku dafirtay ku lug lahaanta Farmaajo ee heshiiskaan ayuu markale Wasiir Cabdirashiid Wareysi uu bixiyay ku sheegay in uu la ogaa Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Heshiiskaan oo dhacay 15kii Febaraayo 2022, waxa uu soo bannaanbaxay 19kii Febaraayo 2022, Wasiirka Batroolka & Macdanta XFS Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in heshiiskaas uu ku kacayo $7 Milyan oo Doollar (Todobo Milyan oo Doollar).
“File-kaan waxaa si gaar ah gacanta ugu hayay Aniga & Madaxweynaha oo muddo dheer howshiisa wadnay, haddii ay noqoto shaqada guud ee Batroolka, In shirkadahaan Xamar yimaadaan oo heshiiskaan lala galo intaba waxaa si khaas ah ila waday Madaxweynaha” ayuu yiri Wasiirka Batroolka XFS Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Dhanka kale Wasiirka ayaa u sheegay saaxibadiisa gaarka ah inuusan isaga kaliya dusha saaranaynin danbiga la xiriira saxiixyada qarsoodiga ah oo ay dowlada Soomaaliya la gashay shirkado badan.
Haddaba, go’aan ceynkee ah ayuu Xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka ka qaadan doonaa heshiiskaan iyo jawaabaha kasoo baxay su’aalo weydiinta Wasiirka Batroolka iyo Macdanta XFS Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Previous articleQarax Muqdisho lagula beegsaday sarkaal CXD iyo khasaare ka dhashay
Next article16-kii kursi Garbahaarey oo la guddoonsiiyay shahaadada Xildhibaanimo
(Cadeeyn) Sirdoonka Soomaaliya oo 1.5 Milyan udirtay Alshabaab
NISA oo sheegtay in uu is casilay Madaxii Amniyaabka Banaadir Shabaab...